“Dembele wuu sii joogi doonaa Barcelona inkastoo ay jiraan dalabyo badan oo ka yimid kooxo waa weyn” – Wakiilkiisa – Gool FM
(Spain) 21 Agoosto 2019. Moussa Sissoko oo ah wakiilka xiddiga kooxda Barcelona ee Ousmane Dembele ayaa xaqiijiyay, in xiddiga reer France uu sii joogi doono garoonka Camp Nou, isla markaana uusan dooneynin inuu baxo, inkastoo dalabyo badan uu ka helay kooxaha waa weyn ee Yurub.
Saxaafada dalka Spain ayaa sheegtay dhowr jeer suurtogalnimada uu Ousmane Dembele kaga dhaqaaqi karo kooxda Barcelona xagaagan, kaddib markii uu la kulamay dhaawacyo badan ee xiriir ah.
Saxaafada Spain ayaa cadeysay in Dembele la rajeynayo inuu u dhaqaaqo Paris Saint-Germain, maadaama la filayo inuu qeyb ka noqdo heshiiska uu Neymar Jr markale dib ugu soo laabanayo kooxda Barcelona.
Laakiin Ousmane Dembele ayeey u muuqataa inuu sii joogi doono garoonka Camp Nou, kaddib hadaladan uu ka dhawaajiyay wakiilkiisa Moussa Sissoko.
Moussa Sissoko ayaa wareysi uu ku bixiyay wargeyska “L’Equipe” ee dalka France wuxuu ku sheegay:
“Waxaan doonayay inaan si cad oo waadax ah u cadeeyo xaalada Ousmane Dembele”.
“Ma uusan qorsheyneynin inuu ka tago Barcelona xitaa daqiiqad, wuxuu ku faraxsan yahay inuu kooxda la joogo, wuxuuna go’aansaday inuu sii joogo waqti dheer”.
“Waa ciyaaryahan Barcelona ah, wuuna sii wadan doonaa kooxda ilaa 1000%”.
“In kastoo uu ka helay wax ka badan hal dalab kooxaha ugu waa weyn Yurub, hadana Dembele wuu ku qanacsan yahay, wuxuuna doonayaa inuu qeyb ka noqdo kooxdan weyn – Barcelona – wuxuuna doonayaa inuu horumar la sameeyo”.